Meelaha AutoCAD loogu talagalay fayoobida iyadoo la adeegsanayo CivilCAD iyo Station Station - Geofumadas
Luulyo, 2013 Baridda CAD / GIS, GPS / Qalabka, topografia
Tani waa mid ka mid ah Casharrada ugu fiicnaa ee aan aragnay, gaar ahaan dadka isticmaala CivilCAD Waxay rajaynayaan in ay sameeyaan habka ballaadhan ee ballaadhan ee la macaamilka Civil3D ay qaadi doonto tallaabooyin badan oo adag iyo murugo.
Dukumeentiga waxaa la dhisay oo fududeeyay shabakadda by Engineer Manuel Zamarripa Medina, kuwaas oo dad badani ku mahadsanyihiin rabitaankooda ah in ay maalgashi ku sameeyaan buuggan oo tayo leh.
Guud ahaan, dukumeentigu wuxuu ku salaysan yahay qaabdhismeedyada 12 ee ka badan boggaga 60 faahfaahin talaabo talaabo ah; qayb ka mid ah dukumiintiga waxqabadka iyo qorista waa tayo wanaagsan. Shaqooyin badan ayaa loo qabtaa iyada oo macnaheedu yahay isticmaale cusub, oo caddaynaya in wakhti ka dib isticmaalaa khibrad khibrad u leh si ay wax uga qabtaan si dhakhso ah.
Qaybta koowaad, iyadoo la adeegsanayo "CivilCAD" waa mid si aad u fiican loo dhisay, iyada oo la isu dheellitiray sharaxaadda sawirada. Ka dib qaybta sharaxaysa isticmaalka saldhigga guud waa mid xadidan, si kastaba ha ahaatee waa mid wali la taaban karo.
Tani waa mawduuca mawduuca:
Cutubka koowaad wuxuu muujinayaa tusmada, inkastoo aysan haysan tirinta buuxda.
Casharrada si ay u bilaabaan CivilCAD. Qaybtani waxa ay soo koobeysaa awoodaha iyo faa'iidooyinka ay u leedahay CivilCAD, taas oo habka loo marayo codsiga shaxanka ugu badan ee ku baahsan Mexico. Waxa kale oo ay sharraxaysaa dhinacyada muhiimka ah ee la xariira maaraynta miisaanka iyo qaabeynta daabacaadda; halkan dukumiinti waxay leedahay qalad kaliya, maaddaama ay uur leedahay xidhiidhada barta talada ee aad ka baran kartid wax intaa ka badan laakiin waddada goobta aan la muujin.
Barashada si aad u sawirto daraasad cajalad. Waxaa la baraa in badan oo la soo kiciyo cajalad, iyada oo aan loo baahnayn xisaabinta adoo adeegsanaya saddexagaladood, gaar ahaan xariiqyada, wareegyada iyo isgoysyada.
Barashada barashada kacdoonka oo kooraska iyo masaafada. Waa kuwan sida loo isticmaalo qalabyada CivilCAD loogu talagalay sameynta baaritaanno leh wareegsan iyo cajalad ama kooras iyo masaafada; xiiso leh sidoo kale waxay muujinaysaa sida loo sameeyo magdhow lacageed oo leh habka dhexdhexaadka ah dhinacyada labada dhinac.
Barashada xisaabinta iyo sawir-qaadista iskudhafan. Waxaa la baraa sida loo isticmaalo xisaabinta iyo sawirada adoo iskudhafay xogta; Waxaa sidoo kale la sharaxay sida loo abuuro Iskuduwaha UTM.
Aqoonsiga barashada qaabaynta bogga. Sida loo sawirto muuqaalka dhulalka laga bilaabo xisaabinta hannaanka profile, fulinta qoraalka dheeraadka ah ee .scr ayaa lagu daray.
Qaab-hawleedka barashada qaabka shaxanka ee habka shucaaca. Halkaan waxaa ku shaqeynaya illaa jiilalka wareegyada, oo leh xog ku qoran liiska dhibcaha x iyo z sida kuwa laga helo saldhigga guud.
Horumarinta barashada mashruuca kanaalka isgaarsiinta. Qaybtani waa mid ballaaran, marka lagu daro jiilka qaab casri ah, laakiin waxa kale oo uu ka shaqeeyaa naqshadeynta joomatari ee waddada oo ay ku jiraan jidadka yaryar, toosan, muuqaalka dhulka iyo jiilka qaybaha kala duwan. Wax walba waxaa lagu dhisay qaybta SCT Roads, oo ay ka mid tahay helitaanka wareegga xajmiga.
Casharrada si ay u bilawaan Saldhiga Wadarta. Qaybtani waa aasaas ahaan, guud ahaan sharaxaadda astaamaha ugu muhiimsan ee Saldhigga Total Sokkia Set 630 RK; iyo mar kale tixraac in blog ah oo aan ku siin wadada. Inkasta oo buuggu uu sharxayo tallaabooyinka, hadda laga bilaabo dukumiintiga ayaa lumiya dheelitirka garaafyada leh sawiro yar; inkasta oo sida qoraagu leeyahay, waxaa jiri doona dib u hagaajin kadib.
Barashada loogu talagalay garoobaha leh saldhigga guud. Baro inaad isticmaasho Saldhigga Total oo ku yaal sahanada isweydaarsiga; Laga soo bilaabo halkan waa mid xiiso leh in la sharxo sida loo gudbiyo macluumaadka PC-ga oo dhan.
Casharrada laga barto diiwaan gelinta elektarooniga ah. Aqoonso saldhigga guud iyo hantidiisa si ay u sameeyaan sahammo faahfaahsan, iyagoo isticmaalaya diiwaanka xogta elektaroonigga qaadashada xogta aasaasiga ah.
Casharrada gudbinta macluumaadka PC-ga. Baro Isticmaal diiwaanka elektaroonigga ee Saldhigga Total iyo qaadida macluumaadka u gudbinta kombiyuutarka, oo u dhaqaaqaya sawir-siinta sawir-gacmeedka isla markiiba.
Bartayaal loogu talagalay isticmaalka Saldhigga Total iyo Software Application. Baro in la fuliyo barnaamijyada lagu daray Saldhigga, taas oo fududeyneysa tan helitaanka xogta dhulalka.
Dadaal fiican oo uu qoray qoraaga, oo muujinaya qaangaadiisa iyo korniinka si ballanqal u ah dimuqraadiyada aqoonta.
Halkan waxaad ka heli kartaa soo qaado dukumintiga.
Halkan waad arki kartaa waxyaabaha ka badan ee isla qoraaga.
Post Previous«Previous Miyaan u isticmaali karaa sawirrada Google Earth for cadastare?
Post Next Machadka Tifaftirka ah ee horumarinta wadamada MaraykankaNext »
8 Jawaab "AutoCAD Jimicsiyada loogu talagalay sahanaynta iyadoo la adeegsanayo" CivilCAD iyo Station Station "
Maqaalkani wuxuu muujinayaa sida loo sameeyo muuqaalka curiska jira.
Alvaro Hernandez isagu wuxuu leeyahay:
Salaanta, waxaan ahay mid cusub oo waxaan rabaa inaan barto madalcadnimo, waxaan ku arkay dhowr casharro oo waxaan u arkaa inay ka fududdahay tan ka badan tan birta ah'XXXXd, waan xiiseynayaa, waxaan u shaqeeyaa sidii naqshadeeye oo waxaan ka helaa faylal fara badan oo kujira autocad oo horeyba looga soo sameeyay astaamo, qeybaha dusha iwm. laakiin aan lahayn dhibco ama xog uruurin, sidaa daraadeed ma dhalin karo natiijooyinkayga, laakiin waxaan u baahanahay inaan sameeyo xisaabteyda naftayda ee qaybaha, astaamaha ama muuqaalka guud ee sawirka, waxay iga caawin karaan demo ama geedi socodka dhalinta dhibcaha qalooca ee heerka. Waan ka mahadcelinayaa kaalmadaada qiimaha badan, barakada
Ma xasuusto aragtida buug la mid ah Civil3D.
Salaan dalkey Sandino; Markaan halkaas marayo waxaan kugu wargalin doonaa inaad haysato kokokoono. Waxaan rajeynayaa in qalalaasahu dhaqso u dhici doono.
OSCAR ALBERTO ESPINAL isagu wuxuu leeyahay:
Maalinta Wanaagsan Ma leedahay buug la mid ah tan kan aan daabaco laakiin aan barto sida loo isticmaalo CIVIL3D?
Salaan ka timid Nicaragua.
orlando ramon duran runtos isagu wuxuu leeyahay:
Sidee ayey udub dhexaad u tahay. Wuxuu i jecel yahay inuu yahay darajo sare.
ubaxyada ubaxyada isagu wuxuu leeyahay:
ing.samarripa Waxaan ahay shaqsi isku dayey inuu qaato koorsada autocad iyo madadaalada laakiin sababaha qaar awgood ma aanan qaban karin waanan baxay oo waxaan arkay barnaamijkiisa waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiisto raallinimo haddii aad kari karto inaad ku aragto fiidiyahaaga si aad u barato sawirrada Isuduweyaashu waxay gacantooda ku hayaan maskaxda autocad iyo Civilcad iyo hadaan fursad u helo inaan la shaqeeyo Maajo markay tahay damaanadda ogaanshaha inaan qabanayo shaqo fiican. Haddii aad i caawin kartaan, aad ayaan ugu faraxsanahay in Eebbe kaa buuxiyo iibka.
Waxaan bedelay faylka.
Xaqiiqdii, way dhaawacantay.
Carlos Adrian Acosta P. isagu wuxuu leeyahay:
Si aan kuugu wargaliyo inaad isku deyeyso inaad soo dejiso feylka… Soo dejiso CivilCAD iyo Wadarta Waxabarashada Saldhigga…. iyo ka dib markaan soo dejisto markaan furo, waxaan helaa farriin odhanaya:
Faylkaasi ma furmi karo sababtoo ah ma aha nooca faylka la taageeray ama dhaawacmay (tusaale ahaan, waxaa loo soo diray lifaaq email ah oo aan si sax ah loogu dhajin).
Waa wax aad u xiiso badan in aad ku tababbarato mowduuca, haddii aad iga caawin karto tan waan kugu mahadinayaa, ama hagaajinta feylka ama waxaad iigu soo diri kartaa boostada.
KU SHAQEYSAN KARTAA WAXQABADKA.